Akaakuu Taattoo Tarjaa fi Kabala
Akaakuun kun taattoo kabala yookan caatoo kabala sarjaa kabalootaa waliin agarsiisa. Dheerinni kabala tokkon tokkoo gitaawaa gatii isaati. Siilloon x akaakuu agarsiisa. Siilloon y gatii akaakuu tokkoon tokkoo agarsiisa.
Baratamoo - Akaakuu xiqqaan gatii deetaa akaakuu hunda walitti aansee dhufuu agarsiisa. Xiyyeffannoo guddaan tokkoon tokkoo gatii deetaa kan biroo waliin wal dorgomsiisu dha.
Walirra Tuulaa -Akaakuu xiqqaan gatii deetaa akaakuu tokkoon tokkoo gubbaa walii irratti akka argaman agarsiisa. Xiyyeffanaa guddaan akaakuun hundi fi tokkoon tokkoo gatii akaakuu isaa waliin gahee qabu adda baasudha.
Dhiibbayyaa - akaakuu xiqqaan firummaa dhibbeentaa tokkoon tokkoo gatiii deetaa waligala akaakuu hundaa agarsiisa. Xiyyeffannoo inni guddaan gahee deetaan fira ta'aan gatii hundaaa akaakuu maraan qaban beekudha.
Gatii deetaa 3D view dandeessisuu dandeessa. Gurmoon "realistic" 3D fakkaatti isaa bareechee mal akka fakkatu kenna. Gurmoon "simple" taattoo mul'annoo waajjira oomisha biroo agarsiisuu yaala.
Taattoo 3D dhhf, boca gatii tokkoon tokko deetaa Saduuqa, silinderii,koonii fi piraamidii irraa filachuu dandeessa.
Akaakuun kun kabala taattoo ykn kabala caatoo kabala dalgee agarsiisa. Dheerinni kabala tokkoon tokkoo gatii isaa waliin walgita. Siilloon y akaakuu agarsiisa. Siilloon x gatoo akaakuu hundaa agarsiisa.
Akaakuu xiqqaan gosa tarjaa waliin walfakkata.
Title is: Akaakuu Taattoo Tarjaa fi Kabala